Ha i weydiinin waa maxay filimka POF ee kuleylka yareyn kara, hoos kuu sheegayaa?
Waa maxay farqiga u dhexeeya filimka yaraanaya ee POF iyo filimka yaraada polyvinyl chloride?
POF shan-lakab oo wada-soo-saarid kuleylka filimka yareyn kara ayaa ah wax soo saar jiil cusub oo si tartiib tartiib ah u soo ifbaxay sannadihii ugu dambeeyay dadkuna ay aqbaleen. Noocyada jawiga ku habboon ee lakabyada badan leh ee isku dhafan ee loo yaqaan 'polyene polused' ee POF kuleylka filimku wuxuu adeegsadaa polyetylen-cufan hooseeya (LLDPE) oo ah m ...
Isbarbardhigga guryaha jireed ee filimka POF ayaa yaraanaya filimka iyo filimka yaraaday ee PE iyo PVC?
1. Qiyaasta POF saamigeedu waa 0.92, dhumucdiisuna waa 0.012mm, qiimaha dhabta ah ee cutubka ayaa ka hooseeya. Saamiga PE waa 0.92, dhumucdiisuna waa 0.03 ama ka badan, qiimaha qaybta dhabta ah ayaa ka sarreeya. Saamiga PVC waa 1.4, dhumucdiisuna waa 0.02mm, qiimaha qaybta dhabta ah ayaa ka sarreeya. 2. Waxyaabaha jireed ee POF waa kuwo dhuuban oo adag, mid ...
Polyolefin Pof Shrink Film, Iskudhin Duubista Filimada, Duubista Polyolefin Pof, Kala Bixinta Filimka Vs Duubista, Yaree Filimka PCv, Polyolefin Iskudhin Heerkulka,